AmaNgqina KaYehova AseAsia NakuMbindi Mpuma
ABEMI 4 464 374 770
ABAVAKALISI 728 989
IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 771 272
Wathetha Nomntu Nje Omnye, Kwancedakala Abaninzi
KwiiPhilippines, uJonathan wayelinde ugqirha awayeza kudibana naye. Ibhinqa elalisebenza kwigumbi lokwamkela iindwendwe labona umntu owayenxibe kakuhle laza lambuza ukuba uthengisa i-inshorensi na. UJonathan walicacisela ukuba uliNgqina LikaYehova ibe uzokunceda elinye iNgqina elize kunyangwa. Lichukumisekile, eli bhinqa linguLaila, laxelela uJonathan ukuba utata walo osandul’ ukusweleka wayezifunda qho iiMboniselo. UJonathan walifundela uYohane 5:28, 29 waza walishiyela nephecana elithi, Liyintoni Ithemba Ngabafileyo Obathandayo?
KwiiPhilippines: UJonathan ushumayela kwibhinqa elisebenza kwigumbi lokwamkela iindwendwe
Qho esiya esibhedlele wayephathela uLaila iincwadi ibe wacela omnye udade ukuba amqhubele isifundo seBhayibhile. Zange kube kudala, umyeni kaLaila, umama wakhe nodade wabo, ababehlala naye bafuna ukufundelwa nabo.
Ummelwane kaLaila uRose, wabuza kuLaila ukuba kutheni kumane kufika abantu abaninzi kangaka endlwini yakhe? ULaila wamcacisela ukuba amaNgqina KaYehova amfundisa iBhayibhile. Akuva loo nto, naye uRose wafuna ukufundiswa iBhayibhile. Xa eyokutyelela udade wabo uAbigail ekhayeni elalikwelinye iphondo, engakwazi ukuzibamba yimincili wambalisela ngezinto awayezifundiswa. Zazimenza umdla ezi zinto wayeziva uAbigail, kangangokuba naye wacela ukufundiswa iBhayibhile. Nomama wakhe waqalisa ukufunda iBhayibhile namaNgqina.
ULaila uye wabhaptizwa kwindibano yengingqi yakutshanje. Nomama wakhe ubhaptiziwe. Ummelwane kaLaila uRose nodade wabo uAbigail, baye babhaptizwa kunyaka ophelileyo. Nomama kaRose akaphoswa ziintlanganiso. Namanye amalungu entsapho kaLaila aqhutyelwa isifundo seBhayibhile. Yonke le nto yaqala ngomntu nje omnye ekwathethwa naye esibhedlele!
Basebenzisa Iteknoloji Ukuze Bafumane Abangevayo
Iya ikhula intsimi yentetho yezandla eSri Lanka. Ngo-2015, zazingafiki naku-80 iiadresi zabantu abangevayo awayenazo amaNgqina, zibhalwe nje ephepheni. Ukususela ngoko, kuye kwabakho ibandla lentetho yezandla yaseSri Lanka ibe kusetyenziswa ikhompyutha, kuye kwabhalwa nabantu abathetha ngezandla neeadresi zabo. Babemalunga ne-420 xa bebonke. Abazalwana babafumana phantse bonke ngokuya kubo, ngokubafowunela ngevidiyo okanye bababhalele imiyalezo. Esinye isibini esingabathunywa bevangeli sithi: “Ngoku siyakwazi ukunika abavakalisi bentetho yezandla umhlaba amabashumayele kuwo. Kaloku ngaphambili, bebesiya kuphela kwabo babaziyo.”
Umntu Osebenza Kwarhulumente Uyabulela
Noba sele liqhaqhazelis’ amazinyo, akukho nto ibanqandayo abazalwana baseMongolia ukuba bangayokushumayela ngeetroli kwiindawo eziphithizelayo. Omnye umntu osebenza kwarhulumente wathatha iincwadi kwitroli waza wabhala umyalezo ebulela. Uthi lo myalezo: “Mna ndingumBhuda. Kodwa ndiye ndafunda nangezinye iindlela ezininzi ezenziwa ngazo izinto. Ndazixelela ukuba akufuneki ibengathi sifakwe imikhala, kufuneka khe sifunde nezinye iindela. Emva kokuba ndifunde iincwadi zenu, ndiye ndaqonda ukuba mandinichazele indlela endiziva ngayo. Yiyo le nto ndibhale le leta. Kucacile ukuba nichitha ixesha lenu elininzi namandla nisibhalela izinto ezisinceda kakhulu. Eyona nto ndiyifundileyo kwiincwadi zenu kukuba mntu ngamnye umele ayifunde iBhayibhile. Yeyona ncwadi inenyaniso le. Inawona macebiso asincedayo kubomi bethu. Ndibulela kakhulu nakwabo basebenza nzima beguqulela iincwadi kwisiMongolia. Ndingabalibalanga nabo basinika iincwadi eziluncedo kungakhathaliseki ukuba liqhaqhazelis’ amazinyo okanye likhuph’ iintlaz’ emanzini.”
EMongolia: Bashumayela kubanda kunjalo
Waviwa Umthandazo Wakhe
Omnye umzalwana onguvulindlela eHong Kong, uBrett, wadibana nomnye umfana osele edlulile kwiminyaka eyi-25 waza wamnika iphecana elithi, Yintoni Enokwenza Intsapho Yakho Yonwabe? Xa ebona eli phecana, zavele zazehlela iinyembezi kulo mfana. Waxelela uBrett ukuba ukhuliselwe enyanisweni, kodwa wathi xa eneminyaka eyi-16 wemka kokwabo. Kangangeminyaka emihlanu wayehlala estratweni elikhoboka leziyobisi, kodwa ke waye wacholwa ngomnye umbutho onceda abantu abangenamakhaya.
Lo mfana wathi, ngala ntsasa adibana ngayo nalo mzalwana waye wathandaza esithi, “Ukuba le nkonzo ndandikhuliselwe kuyo yeyona ifanelekileyo, ndicela undibonise umqondiso namhlanje.” Wabona ukuba umthandazo wakhe uphendulwe. Baya kwivenkile ekufutshane baza baxubusha incwadana ethi, Buyela KuYehova. Lo mfana wayeza kubuyela eFransi ngaloo mini ngoko banikana inkcukacha. Zange kube kudala, lo mfana wabhalela uBrett esithi: “Mzalwana wam, uYehova uyiphendule imithandazo yam. Ndiza kuya kwiholo ekufutshane ngeCawa.” Wadibana namaNgqina eFransi, waqala ukuqhutyelwa isifundo seBhayibhile nokuya ezintlanganisweni.